काठमाडौं । यसै महिनाको अन्त्यमा हुन गइरहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको औपचारिक नेपाल भ्रमणको व्यापक तयारी भएको छ । सरकारको विशिष्ट निकाय, गृह मन्त्रालय, विभिन्न सुरक्षा निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय...
सशस्त्र प्रहरीले १३४ स्थानमा पिङ हाल्यो
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले १३४ स्थानमा पिङ हालेको छ। वडादशैंको अवसरमा देशका विभिन्न ठाउँहरुमा स्थानीय वासिन्दाका लागि एक सय ३४ वटा पिङ हालेको हो । सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय वासिन्दाहरुलाई लक्षित गरी ...
आज दशैंको सातौं दिन, देशभरका शक्तिपीठमा फूलपाती भित्र्याइँदै
काठमाडौं । आश्विन शुक्ल सप्तमीका अवसरमा आज(शनिबार) देशभरका शक्तिपीठमा फूलपाती भित्र्याइँदै छ। आज हनुमानढोका दरबारस्थित दशैँघरमा सरकारी तबरबाट फूलपाती भित्र्याइँदैछ । केराको पात, अदुवा, दारिम, बयर, फू...
काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएपछि देशका कार्यकारी प्रमुखले उ‌द्घाटन गरेका त्यस्ता निर्मित संरचना नियमित काममा आउँछन् भन्ने सर्वसाधारणलाई लागेको हुन्छ। कार्यकारी प्रमुखले उ‌द्घाटन गरेको मात्र नभई सम्पन्...
रित्तै जापान उड्ने निगमको उडानमा यात्रुको चाप
चाडपर्व नजिकिएसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको जापानको ओसाका उडानमा यात्रुको चाप बढेको छ। दशैं, तिहार र छठ शुरु भएसँगै काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं उडानमा यात्रुको चाप बढेको निगमले जनाएको छ। नेपालीहरु पर्यटकी...
नेपालको संविधानले काम या व्यवसायलाई सेवा र मनोरञ्जन भनेर छुट्ट्याइएको कहिँपनि भेटिँदैन । त्यस्तै व्यवसायजन्य कामहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक भनेर परिभाषा र व्याख्या गरेको पनि भेटिएन । तर पनि श्रम क्षेत्...
शुभकामना ! २०७६ को विजया दशमी हरेक नेपालीको घर,परिवार साथै प्रत्येकको मन,मस्तिष्कमा खुसी लिएर भित्रियोस् शुभकामना ! राजनीति सङ्लिएर अर्घेल्याइ,ढिलासुस्ती हटोस् सर्वसाधारणको जनजिवन सुख र समृ...
सूचना नै उजुरी : यौन दुर्व्यवहारमा पीडितले बोली फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने
काठमाडौं । सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नो भनाइ फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्। ...
सार्कलाई गति दिन सबै राष्ट्र तयार छन् – मन्त्री ज्ञवाली
काठमाडौं । सार्क आबद्ध केही राष्ट्रबीचको मनमुटावले पछिल्लो समय सार्क गतिहीन देखिएको छ । यसको नियमित गतिविधिसमेत केही समयदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभा बैठकमा सहभागी...
चिनियाँ राष्ट्रपति २५ गते आउने
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज २५ गते अर्थात् अक्टोबर १२ तारिखमा नेपाल आउने भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण दुई साताअघि नै तय भए पनि सरकारले गोप्य राखेको छ। सरकारी उच्च स्रोतका अ...
६ फिट गहिरो पानीको खाल्डोमा ५ जनाको शव भेटियो
बारा । बाराको फेटा गाउँपालिका– ४ स्थित बताराको खाली घरभित्र पाँच जनाको शव भेटिएको छ। गएराति खाली घरभित्र गाडिएको अवस्थामा ५ जनाको शव भेटिएको बाराका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जित सिंह राठौंरले जानकारी दिएका ...
आज दसैंको पाँचौं दिन : स्कन्दमाताको पूजाआजा
काठमाडौं । आज आश्विन शुक्लपक्षको पञ्चमी तिथि परेकाले देवीको पाँचौं रुप स्कन्दमाताको पूजाआजा गरिंदैछ। भूमिमा रहेको वीर्यबीज शक्तिबाट स्कन्दलाई जन्म दिएकी हुनाले माता पार्वतीको यो रुपलाई स्कन्दमाता भने...
सन् २०२१ को लागि डिभी खुल्यो
काठमाडौं । सन् २०२१ को लागि डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को लागि आवेदन खुल्ला भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०१९ अगष्ट २ देखि नोभेम्बर ५ सम्म आनलाइनमार्फत आवेदन खोलेको हो । अमेरिकाको आप्रवासी ऐन (इमिग्...
सुनसरीमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, पाँच मध्ये दुई जना फरार
सुनसरी । सुनसरीमा एक युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा तीन जनालाई मङ्गलबार इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही घटनामा संलग्न भएका दुई फरार छन् । इटहरीमा सोमबार मध्यरातमा पाँच य...
एजेन्सी । आज हात्मा गान्धीको १५० औं जन्म जयन्ती, भारतमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । आजै भारतका दोस्रो प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीको पनि ११६औं जन्मजयन्ती समेत मनाइँदैछ । भारतका विभिन्न स्...
नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार आज
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा रहेको फोरजी(4G) सेवा विस्तारको कामले आज(बुधबार) ठोस नतिजा हासिल गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बेलुका ५ बजे मुख्यमन्त्रीसहित व...
प्रदशर्नकारी र प्रहरीबीच हिंसात्मक झडप, १५ जना घाइते
एजेन्सी । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठको उत्सव मनाउँदै गर्दा हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधरले प्रदर्शन गरेका छन् । सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंस्रक झडप भ...